सस्तो होइन, भरपर्दो युपिएस रोजौं ! « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
स्वास्थ्य क्षेत्रका सारथी
२०७८, २२ आश्विन शुक्रबार १६:१७ मा प्रकाशित
विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा त्यसको ब्याकअपका लागि युपिएस महत्वपूर्ण र अति आवश्यक मानिन्छ । अझ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त यसको झनै महत्व छ । नेपालभर झण्डै एक हजार भन्दा बढी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र डायग्नोस्टिक सेन्टरहरुमा एसपावर कम्पनीका पावर व्याकअप यूपिएस प्रयोग भइरहरेका छन् । हजारौंको संख्यामा सेवाग्राही छन् । देशभर ४ सय डिलर छन् । एस पावर नेपाल युपिएस सप्लायर्स कम्पनी हो जसले दुई दशकदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको नाम र उत्पादनको नाम दुबै एस पावर नै राखिएको हुनाले अधिकांश मानिसहरु यसलाई लोकल ब्रान्ड र मेड इन नेपाल भन्ने बुझ्छन् । वास्तवमा यसको सामान टर्कीमा उत्पादन हुन्छ । एस पावरका कतिपय सामानहरु इटालीमै पनि उत्पादन गरिन्छन् । यो कम्पनिले कोरोना महामारीबीच अस्पताललगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सेवा दिन सफल भयो ? लगायतका विभिन्न पक्षमा एस पावरका प्रबन्ध निर्देशक मुरारी झासँग जनस्वास्थ्य सरोकारले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा एस पावरको महत्वबारे बताइदिनुस् न ?
नेपालका अधिकांश ठूला साना १ हजार भन्दा बढी अस्पताल, क्लिनिक र डायग्नोस्टिक सेन्टरहरुमा एस पावरका उत्पादनहरु प्रयोग भइरहेका छन् । मल्टिनेसनल कम्पनीहरुले पनि आफ्ना उत्पादनहरुमा एसपावरका युपिएस प्रयोग गर्र्दै आइरहेका छन् । करोडौँ मुल्य पर्ने उपकरण नबिग्रियोस् भनेर युपिएस प्रयोग गरिन्छ । एमआरआई, सिटीस्क्यान, क्याथल्याव, अल्ट्रासाउन्ड, सिआर, डिआरलगायतका सबै उपकरणहरु कम्यूटरबेसमा प्रयोग हुने गर्दछन् । युपिएस बिना एक सेकेन्ड पनि चलाउन नमिल्ने उपकरणहरु बजारमा आइसकेका छन् ।
झ्याप्प बत्ती जाँदा यस्ता उपकरण बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने बत्ती एकैनासको नहुन सक्छ । कहिले हाई भोल्टेजको आउँछ त कहिले कम आउन सक्छ । युपिएसले यसलाई स्थिर गर्ने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा बत्ती गए पनि उपकरण चलिरहन्छ ।
एस पावर कम्पनीको सफलताको राज के हो ?
नेपालमा दुई दशकदेखि लाखौं सेवाग्राहीको सेवाप्रति विशेष ध्यान दिएका छौँ । कम्पनीका उत्पादन भरपर्दो र विश्वासनीय छन् । यूपिएस बिग्रिहालेमा समयमै सरल मुल्यमा मर्मत गर्छौं । टेक्निसियनलाई तयारी अवस्थामा राखेका छाँैँ ।
कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाबीच एस पावर कम्पनीले कसरी सेवा दिन सफल भयो ?
कोरोना महामाहरीमा युपिएस बिग्रिएमा टेक्निसियनलाई लिन अस्पतालको गाडी कार्यालयको घरमै आउथ्यो । उनीहरुले सामान्य मर्मत गर्नुपरे त्यहि बनाइदिन्थे । जटिल समस्या भएमा कम्पनीमा ल्याएर मर्मत गरेर पठाइदिन्थ्यौँ । सम्भव भएसम्म रातदिन नभनी सेवा दिएका छौँ ।
किन मानिसहरु एस पावर रुचाउँछन् ?
हामी क्रिटिकल अवस्था भएको ठाउँमा युपिएसले काम नगरेमा जुनसुकै बेलामा पनि तुरुन्त इन्जिनियरहरुलाई मर्मत गर्न पठाउँछौँ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ठूला सहरहरुमा पनि हाम्रा इन्जिनियरहरु तैनाथ छन् ।
लोकल ब्रान्ड र एस पावरको गुणस्तरमा के भिन्नता छ ?
लोकल ब्रान्डका युपिएसहरु हाई भोल्टेज आउँदा बिग्रिन सक्छ । यसले उपकरणलाई सुरक्षा दिन सक्दैन । तर एस पावरका युपिएसहरु हाई भोल्टेज आउँदा बिग्रिन सक्ला । तर यसले मेसिनलाई कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिँदैन । एस पावरका युपिएसहरु युरोपियन स्टन्डर्डमा बनाइएका छन् ।
एस पावरका युपिएसको भोल्टेज क्षमता कति हुन्छ ?
एस पावरका युपिएसहरु १ केभिएदेखि ४ हजार ८ सय केभिए क्षमतासम्मका छन्। नेपालको सन्दर्भमा २ सय ५० केभिए क्षमता सम्मका युपिएसहरु प्रयोग आएका छन् ।
साधारणतया एमआरआई, सिटीस्क्यान र क्याथल्याव मेसिनमा १ सय देखि २ सय केभिए क्षमताका युपिएसहरु प्रयोग भइरहेका छन् ।
के युपिएसको माग आएपछि तुरुन्तै आपूर्ति गर्न सकिन्छ ?
आजभन्दा केही वर्ष अघिसम्म हामी १ देखि २० केभिएसम्मका युपिएस स्टकमा राख्थ्यौँ । बिस्तारै माग बढ्न थालेको छ । अहिले हामीसँग १ सय ६० केभिए सम्मका युपिएस स्टकमा छन् । यो भन्दा माथि १ हजार केभिए क्षमताका युपिएसका माग आएमा हामी सहझै उपलब्ध गराउन सक्छौँ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । युपिएस माग भएको ४५ देखि ५० दिन भित्रमा हामी उपलब्ध गराइसक्छौँ ।
नेपालमा युपिएसको मूल्य कति पर्छ ?
नेपालमा न्यूनतम ५हजार देखि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने युपिएसहरु बिक्रि हुने गरेका छन् । नेपालभर १५ लाख भन्दा बढीले एसपावरका युपिएस प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बिरामीको रोग पहिचान गर्ने उपकरणमा प्रयोग हुने सामान राम्रो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । मुल्य भन्दा गुणस्तरमा ख्याल गर्नुहोला । स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई निर्धक्क भएर एस पावरका उत्पादन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।